Parisy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Paris)
Mbola ambangovangony amin'ny resaka Tanàna ao Frantsa ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Isam-ponina 2,181,371 mponina
Ben'ny tanàna Anne Hidalgo
Parisy dia tanàna renivohitr'i Frantsa. Izy ny tanàna ngeza indrindra any Frantsa, izy ny renivohi-toeran'i Île-de-France, ary Paris intra-muros irery no Commune-Departement any Frantsa. Eo amin'ny vondro-milefaka voalohany indrindra ny la Seine i Paris, eo ampivoan'ny Bassin Parisien, any anirany no misy ny vinanindrano anelanelan'ny Marne sy ny Seine. Any anavan'i Paris no misy ny Oise. Parizianina any anaran'ny olona mipetraka any Paris.
Tamin'ny taonjato faha 17, Parisy ny renivohitry ny fahefana voalohany eoropeana, tamin'ny taonjato faha 18 izy renivohitra ara-kolontsain'i Eoropa ary tamin'ny taonjato faha 19 izy renivohitra ny taozavatra sy ny fahafaliana. Tamin'ny 2008, raha kaontiana daholo ny trano ipetrahana rehetra, 28 tapitrisa ny isan'ny mpandendeha tao Paris, araka ny lazain'ny Office de Tourisme sy ny Kongresa ny renivohitra frantsay.
Fantatra fa efa nisy nipetraka teo amin'ny toeran'i Paris ankehitriny efatra enina arivo taona teny aloha (-4000 - -3800) tamin'ny lafy ankavia ny la Seine taloha eo amin'ny toerana misy ny arrondissement faha 12 ankehitriny. Nisy olona foana teo tamin'ny Neôlitika.
Efa hita fa efa nisy vohitra tany Bercy 2400 taona tany aloha, misy lakana anaty ranom-potaka tamin'izany fotoana izany, ary afaka jereina any amin'ny Musée Carnavelet any Parisy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Parisy&oldid=995156"
Dernière modification le 28 Jolay 2020, à 09:35
Voaova farany tamin'ny 28 Jolay 2020 amin'ny 09:35 ity pejy ity.